New Billabig step backwards for RTI — သတငျးအခကျြအလကျအခှငျ့အရေးကို နောကျသို့အကွီးအကယျြခွလှေမျးဆုတျသှားစသေော ဥပဒကွေမျးအသဈ – Free Expression Myanmar
Jul 18, 2019 by Coordinator	in Bills
If adopted, the Myanmar government’s new Bill would significantly undermine the right to information (RTI) in one of the world’s most secretive countries. FEM urges the government and parliament to substantively revise the Bill in accordance with international democratic standards.
The Ministry of Planning and Finance has proposedaNational Records and Archives Bill in June 2019 to replace the 1990 law, as amended in 2007. The government’s decision to replace the 1990 law is positive because the 1990 law is deeply undemocratic.
However, the proposed Bill is very problematic too and would significantly undermine RTI. The Bill would perpetuateasystem where all information is the government’s secret property and any public access to that information would be regarded asasecurity threat. It would createagovernment-controlled supervisory body with extensive and unrestrained powers and create an ominous risk for media and civil society.
The government would be able to classify any information whatsoever as “strictly confidential” and hide it away for 30 years or more. The Bill includes no safeguards and no independent body (such asacourt or Information Commission) to review the government’s decisions. Therefore, the government could easily misuse the “strictly confidential” classification to hide information about corruption, wrong-doing, or human rights violations.
Any and all requests for access to government-held information would have to be individually approved in advance by the chairperson of the law’s supervisory body. The chairperson of the supervisory body is the Union Minister for Planning and Finance. The law does not say on what basis the Minister must make this decision and there is no option to appeal to an independent court or Information Commission. Accessing information without permission would attractaprison sentence. Therefore, the government would be in complete control of deciding who can access information, even information at the lowest level of confidentiality classification.
If adopted, the Bill would result inalegal framework that is the opposite of RTI, and the opposite of global democratic trends towards greater transparency. In particular:
RTI requiresapresumption (or default) of maximum disclosure because inademocracy information held by the government is public property. However, this Bill makes information government property and secrecy the presumption.
RTI requires governments to proactively publish information rather than wait for an individual request. However, this Bill does not require the government to publish anything.
RTI requires open governments to inform the public about their rights. However, this Bill does not require the government to inform the public how to access information.
RTI requires laws to havealimited scope of exceptions to information release. However, this Bill has an unlimited scope of exceptions because the Minister can classify anything as confidential.
RTI requires clear and timely processes to facilitate access. However, this Bill fails to define any processes whatsoever.
RTI requires the costs of releasing information to be proportionate, for example to pay for photocopying. However, this Bill says that the Director General will decide the costs for each request, and there is no framework for deciding how much.
RTI requires whistleblowers – persons who release information on government wrongdoing – be protected from legal, administrative or employment-related punishment. However, this Bill includes prison sentences for accessing or publishing information without government permission.
After nine years of political transition, Myanmar still has one of the most secretive governments in the world. Civil society and media often highlight how difficult it is to access even the most basic information held by the government. This Bill would perpetuate that.
အစိုးရ၏ယခုဥပဒကွေမျးအသဈကိုအတညျပွုပွဌာနျးလိုကျမညျဆိုပါကကမ်ဘာ့အလြှို့ဝှကျဆုံးနိုငျငံမြားအနကျမှတဈနိုငျငံဖွဈသောမွနျမာနိုငျငံ၏သတငျးအခကျြအလကျသိပိုငျခှငျ့ကိုသိသိသာသာသေးသိမျမှေးမှိနျစပေါလိမျ့ မညျ။ထို့ကွောငျ့ယခုဥပဒကွေမျးကိုနိုငျငံတကာဒီမိုကရစေီစံနှုနျးမြားနှငျ့အညီဓမ်မဓိဌာနျကကြပြွငျဆငျပေးရနျအစိုးရနှငျ့လှတျတျောအားFEM မှတိုကျတှနျးလိုကျပါသညျ။
၁၉၉၀ခုနှဈတှငျပွဌာနျးပွီး၊၂၀၀၇ခုနှဈတှငျပွငျဆငျခဲ့သညျ့အမြိုးသားမှတျတမျးနှငျ့မျောကှနျးဥပဒကေိုအစားထိုး ရနျစီမံကိနျးနှငျ့ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီးဌာနမှအမြိုးသားမှတျတမျးနှငျ့မျောကှနျးဥပဒကွေမျးတဈခုကို၂၀၁၉ခုနှဈဇှနျလ ကတငျသှငျးခဲ့သညျ။၁၉၉၀ခုနှဈဥပဒသေညျဒီမိုကရစေီနညျးလမျးသိသိသာသာပငျမကသြဖွငျ့ယငျးကိုအစား ထိုးမညျ့မွနျမာအစိုးရ၏ဆုံးဖွတျခကျြမှာအပွုသဘောဆောငျသညျဟုဆိုရမညျဖွဈသညျ။
သို့သျောလကျရှိဥပဒကွေမျးသညျလညျးပွသနာအလှနျရှိပွီး၊သတငျးအခကျြအလကျလှတျလပျခှငျ့ကိုခြိုးနှိမျ ထားလိမျ့မညျဖွဈသညျ။သတငျးအခကျြအလကျဆိုသညျမှာအစိုးရ၏လြှို့ဝှကျပိုငျဆိုငျမှုဖွဈပွီး၊ယငျးသတငျးအ ခကျြအလကျမြားသို့ အမြားပွညျသူလကျလှမျးမီရနျလုပျဆောငျသညျ့မညျသညျ့ကွိုးပမျးခကျြကိုမဆိုလုံခွုံရေး ခွိမျးခွောကျမှုအဖွဈသတျမှတျထားသညျ့စနဈကိုယငျးဥပဒကွေမျးမှကွာရှညျတညျတံ့စပေါလိမျ့မညျ။အစိုးရမှ ကွီးကွပျကာအထိနျးအခြုပျကငျးမဲ့ကယျြပွနျ့သညျ့အာဏာမြားရှိသောအဖှဲ့တဈခုကိုဥပဒကွေမျးမှပျေါပေါကျ လာစပွေီး၊မီဒီယာနှငျ့အရပျဖကျလူ့အဖှဲ့အစညျးမြားသို့စိုးရိမျဖှယျရာဖွဈနိုငျခအြေန်တရာယျမြားသကျရောကျလာ မညျဖွဈသညျ။
၁။မညျသညျ့သတငျးအခကျြအလကျကိုမဆိုအစိုးရမှ“ထိပျတနျးလြှို့ဝှကျအဆငျ့” အဖွဈသတျမှတျပွီး၊ယငျးအခကျြအလကျကိုနှဈပေါငျး(၃၀) သို့မဟုတျထို့ထကျကြျောလှနျ၍ထိနျးခြုပျဖုံးကှယျထားနိုငျမညျ ဖွဈသညျ။အစိုးရ၏ဆုံးဖွတျခကျြကိုပွနျလညျသုံးသပျရနျဥပဒကွေမျးတှငျ(တရားရုံးသို့မဟုတျသတငျးအ ခကျြအလကျကျောမရှငျကဲ့သို့သော) လှတျလပျအမှီအခိုကငျးသညျ့အဖှဲ့နှငျ့အကာအကှယျလုံးဝမပါဝငျခြေ။ထို့ကွောငျ့အစိုးရမှအကငျြ့ပကျြခွစားမှု၊မှားယှငျးသောလုပျဆောငျမှုသို့မဟုတျလူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှု မြားကိုဖုံးကှယျဝှကျရနျ“ထိပျတနျးလြှို့ဝှကျအဆငျ့” သတျမှတျခကျြကိုလှယျကူစှာပငျတလှဲအသုံးခနြိုငျမညျ ဖွဈသညျ။
၂၊ အစိုးရထိနျးခြုပျထားသညျ့သတငျးအခကျြအလကျမြားကိုရယူရနျတောငျးခံရာတှငျဥပဒမှေပွဌာနျးထား သောကွီးကွပျရေးအဖှဲ့၏ဥက်ကဌမှတောငျးဆိုခကျြတဈခုခငျြးစီအားကွိုတငျခှငျ့ပွုခကျြပေးရမညျဖွဈသညျ။ကွီးကွပျရေးအဖှဲ့၏ဥက်ကဌသညျစီမံကိနျးနှငျ့ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီးဖွဈသညျ။ဝနျကွီးမှမညျသညျ့အခကျြကို အခွတေညျ၍ဆုံးဖွတျရမညျဖွဈကွောငျးဥပဒတှေငျပွောထားခွငျးမရှိသကဲ့သို့၊လှတျလပျအမှီအခိုကငျး သညျ့ တရားရုံးသို့မဟုတျသတငျးအခကျြအလကျကျောမရှငျသို့အယူခံဝငျနိုငျသညျ့အခွားမညျသညျ့ရှေး ခယျြစရာမြှမပါရှိခြေ။ခှငျ့ပွုခကျြမရဘဲသတငျးအခကျြအလကျကိုရယူလြှငျထောငျဒဏျကခြံရမညျဖွဈ သညျ။ထို့ကွောငျ့အနိမျ့ဆုံးဖွဈသညျ့ကနျ့သတျအဆငျ့သတငျးအခကျြအလကျကိုပငျလြှငျမညျသူကရယူနိုငျ ကွောငျး ဆုံးဖွတျရာ၌အစိုးရကသာအပွညျ့အဝထိနျးခြုပျနိုငျလိမျ့မညျ။
သတငျးအခကျြအလကျအခှငျ့အရေးသညျအမြားဆုံးထုတျဖျောခကျြကိုကနဦးအယူအဆတဈရပျ အဖွဈလိုအပျသညျ။(သတငျးအခကျြအလကျကိုအစိုးရမှခြုပျကိုငျမထားဘဲပွညျသူသို့မြားနိုငျသမြှအမြား ဆုံးထုတျဖျောပေးရမညျဟူသောအယူအဆကိုအခွခေံအယူအဆအဖွဈထားရှိရမညျ။) အဘယျကွောငျ့ဆို သျောဒီမိုကရစေီနိုငျငံတဈခုတှငျအစိုးရမှထိနျးသိမျးထားသောသတငျးအခကျြအလကျမြားသညျအမြားပွညျ သူ၏ပိုငျဆိုငျမှုဖွဈသညျ။သို့သျောဥပဒကွေမျးသညျသတငျးအခကျြအလကျမြားကိုအစိုးရပိုငျဖွဈစပွေီး၊အမြားဆုံးထုတျဖျောခကျြအစားလြှို့ဝှကျခကျြကိုသာအခွခေံအယူအဆဖွဈစသေညျ။
သတငျးအခကျြအလကျအခှငျ့အရေးသညျတောငျးဆိုခကျြတဈရပျကိုစောငျ့နရေနျထကျသတငျးအ ခကျြအလကျမြားကိုတောငျးစရာမလိုဘဲကွိုတငျတကျကွှစှာထုတျဝပေေးရနျလိုအပျသညျ။သို့သျောဥပဒေ ကွမျးအရအစိုးရသညျမညျသညျ့သတငျးအခကျြအလကျကိုမြှထုတျပွနျရနျမလိုအပျခြေ။
သတငျးအခကျြအလကျအခှငျ့အရေးသညျလူထုကိုယငျးတို့၏အခှငျ့အရေးမြားအား အသိပေးတငျ ပွရနျပှငျ့လငျးသောအစိုးရကိုလိုအပျသညျ။သို့သျောဥပဒကွေမျးအရအမြားပွညျသူသညျသတငျးအခကျြ အလကျမညျသို့ရယူနိုငျကွောငျးကိုအစိုးရမှအသိပေးတငျပွရနျမလိုအပျခြေ။
သတငျးအခကျြအလကျထုတျပွနျရာတှငျသတငျးမထုတျပွနျရသညျ့ခြှငျးခကျြနယျပယျကိုကနျ့သတျ ရနျသတငျးအခကျြအလကျအခှငျ့အရေးကဥပဒမြေားလိုအပျသညျ။သို့သျောဥပဒကွေမျးအရဝနျကွီးသညျမညျသညျ့သတငျးအခကျြအလကျကိုမဆိုလြှို့ဝှကျအဆငျ့သတျမှတျနိုငျသညျ့အတှကျသတငျးမထုတျပွနျရ သညျ့ခြှငျးခကျြနယျပယျသညျ့အကနျ့အသတျမရှိဖွဈနသေညျ။
သတငျးအခကျြအလကျအခှငျ့အရေးသညျသတငျးအခကျြအလကျထုတျပွနျပေးရာ၌ဥပမာ- မိတ်တူ ကူးခွငျးစသညျတို့တှငျလိုအပျသညျ့အခကွေးငှကေိုအခြိုးအစားမြှမြှတတသတျမှတျပေးရနျလိုအပျသညျ။သို့သျောညှနျကွားရေးမှူးခြုပျမှသတငျးအခကျြအလကျထုတျပွနျရနျတောငျးဆိုမှုတဈခုခငျြးစီအတှကျအခ ကွေးငှကေိုဆုံးဖွတျပေးမညျဟုဥပဒကွေမျးမှဆိုထားပွီး၊ငှကွေေးပမာဏဆုံးဖွတျခကျြအတှကျကိုမူမညျ သညျ့မူဘောငျမှထညျ့သှငျးထားခွငျးမရှိခြေ။
သတငျးအခကျြအလကျအခှငျ့အရေးအရ(အစိုးရမှလှဲမှားစှာလုပျဆောငျနသေညျ့သတငျးအခကျြအ လကျမြားကိုထုတျဖျောပွောကွားသညျ့) အဖွဈမှနျဖျောထုတျသူမြားကိုဥပဒေ၊အုပျခြုပျရေးသို့မဟုတျလုပျ ငနျးဆိုငျရာပွဈဒဏျမြားမှအကာကှယျပေးရနျလိုအပျသညျ။သို့သျောဥပဒကွေမျးတှငျအစိုးရ၏ခှငျ့ပွုခကျြ မရဘဲသတငျးအခကျြအလကျမြားကိုရယူခွငျးသို့မဟုတျထုတျပွနျခွငျးအတှကျထောငျဒဏျမြားထညျ့သှငျး ရေးဆှဲထားသညျ။
နိုငျငံရေးအကူးအပွောငျးကာလ(၉) နှဈကွာပွီးနောကျမွနျမာနိုငျငံသညျကမ်ဘာပျေါရှိအလြှို့ဝှကျဆုံးအစိုးရမြား ထဲမှတဈနိုငျငံဖွဈနဆေဲဖွဈသညျ။အစိုးရခြုပျကိုငျထားသညျ့အခွခေံသတငျးအခကျြအလကျလေးမြှကိုပငျရယူ ရနျမညျမြှခကျခဲကွောငျးအရပျဖကျလူ့အဖှဲ့အစညျးနှငျ့မီဒီယာမြားမှမကွာခဏဆိုသလိုမီးမောငျးထိုးပွကွသညျ။ဥပဒကွေမျးမှယငျးခကျခဲသညျ့အခွအေနမြေားကိုတာရှညျစလေိမျ့မညျဖွဈသညျ။
အစိုးရ၏ယခငျကတိကဝတျမြားဖွဈသညျ့သတငျးအခကျြအလကျအခှငျ့အရေးနှငျ့မွနျမာနိုငျငံကိုပိုမိုပှငျ့လငျး မွငျသာသညျ့နိုငျငံတျောအဖွဈပုံဖျောခွငျးတို့ကိုပွနျလညျထပျဟပျဆောငျရှကျရနျ FEM မှအစိုးရနှငျ့လှတျတျော ကိုတိုကျတှနျးလိုကျပါသညျ။
အစိုးရအနဖွေငျ့သတငျးအခကျြအလကျအခှငျ့အရေးဥပဒေ(RTI law) ကိုပွဌာနျးအကောငျအထညျဖျောရနျဆန်ဒမရှိသေးလြှငျသို့မဟုတျမတတျနိုငျသေးလြှငျတောငျမှသတငျးအခကျြအလကျအခှငျ့အရေးကိုသိသာ ထငျရှားစှာခြိုးနှိမျမှေးမှိနျစသေညျ့ယခုဥပဒကွေမျးကဲ့သို့သောဥပဒမြေားကိုရေးဆှဲပွဌာနျးခွငျးမှရှောငျကွဉျ သငျ့ပါသညျ။
-- Zawgyi --
သတင်းအချက်အလက်အခွင့်အရေးကို နောက်သို့အကြီးအကျယ်ခြေလှမ်းဆုတ်သွားစေသော ဥပဒေကြမ်းအသစ်
အစိုးရ၏ ယခုဥပဒေကြမ်းအသစ်ကို အတည်ပြုပြဌာန်းလိုက်မည်ဆိုပါက ကမ္ဘာ့အလျှို့ဝှက်ဆုံးနိုင်ငံများ အနက်မှ တစ်နိုင်ငံဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ သတင်းအချက်အလက်သိပိုင်ခွင့်ကို သိသိသာသာသေးသိမ် မှေးမှိန်စေပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ယခုဥပဒေကြမ်းကို နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနှင့်အညီ ဓမ္မဓိဌာန် ကျကျပြင်ဆင်ပေးရန် အစိုးရနှင့် လွှတ်တော်အား FEM မှ တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
၁၉၉၀ခုနှစ်တွင် ပြဌာန်းပြီး၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့သည့် အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းဥပဒေကို အစားထိုးရန် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကို ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇွန်လက တင်သွင်းခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ခုနှစ်ဥပဒေသည် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်း သိသိသာသာပင်မ ကျသဖြင့် ယင်းကို အစားထိုးမည့် မြန်မာအစိုးရ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ အပြုသဘောဆောင်သည်ဟု ဆိုရမည် ဖြစ်သည်။
သို့သော် လက်ရှိဥပဒေကြမ်းသည်လည်း ပြသနာအလွန်ရှိပြီး၊ သတင်းအချက်အလက်လွတ်လပ်ခွင့်ကို ချိုးနှိမ်ထားလ်ိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်ဆိုသည်မှာ အစိုးရ၏လျှို့ဝှက်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပြီး၊ ယင်းသတင်းအချက်အလက်များသို့ အများပြည်သူလက်လှမ်းမီရန်လုပ်ဆောင်သည့် မည်သည့်ကြိုးပမ်း ချက်ကိုမဆို လုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့်စနစ်ကို ယင်းဥပဒေကြမ်းမှ ကြာရှည်တည် တံ့စေပါလိမ့်မည်။ အစိုးရမှကြီးကြပ်ကာ အထိန်းအချုပ်ကင်းမဲ့ကျယ်ပြန့်သည့် အာဏာများရှိသော အဖွဲ့ တစ်ခုကို ဥပဒေကြမ်းမှ ပေါ်ပေါက်လာစေပြီး၊ မီဒီယာနှင့် အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများသို့ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်နိုင်ချေအန္တရာယ်များ သက်ရောက်လာမည်ဖြစ်သည်။
ဥပဒေကြမ်းတွင် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းမကျသော ပြဌာန်းချက်များပါဝင်ပြီး၊ အဓိကအရေးကြီးသည့် ပြဌာန်းချက် ၂ ရပ်မှာ -
၁။ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို အစိုးရမှ “ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်အဆင့်” အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး၊ ယင်းအချက်အလက်ကို နှစ်ပေါင်း (၃၀) သို့မဟုတ် ထို့ထက်ကျော်လွန်၍ ထိန်းချုပ်ဖုံးကွယ်ထားနိုင် မည်ဖြစ်သည်။ အစိုးရ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် ဥပဒေကြမ်းတွင် (တရားရုံး သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်ကော်မရှင်ကဲ့သို့သော) လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းသည့်အဖွဲ့ နှင့် အကာအ ကွယ်လုံးဝမပါဝင်ချေ။ ထို့ကြောင့် အစိုးရမှ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ မှားယွင်းသောလုပ်ဆောင်မှု သို့မ ဟုတ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို ဖုံးကွယ်ဝှက်ရန် “ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်အဆင့်” သတ်မှတ်ချက် ကို လွယ်ကူစွာပင် တလွဲအသုံးချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၂၊ အစိုးရထိန်းချုပ်ထားသည့်သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူရန် တောင်းခံရာတွင် ဥပဒေမှ ပြဌာန်းထားသော ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ဥက္ကဌမှ တောင်းဆိုချက်တစ်ခုချင်းစီအား ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ဥက္ကဌသည် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဖြစ်သည်။ ဝန်ကြီးမှ မည်သည့်အချက်ကိုအခြေတည်၍ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဥပဒေတွင် ပြောထားခြင်းမ ရှိသကဲ့သို့၊ လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းသည့်တရားရုံး သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်ကော်မရှင်သို့ အယူခံဝင်နိုင်သည့် အခြားမည်သည့်ရွေးချယ်စရာမျှ မပါရှိချေ။ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ သတင်းအချက်အ လက်ကို ရယူလျှင် ထောင်ဒဏ်ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည့် ကန့်သတ်အဆင့် သတင်းအချက်အလက်ကိုပင်လျှင် မည်သူကရယူနိုင်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ရာ၌အစိုးရကသာ အပြည့်အ ဝထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မည်။
ယင်းဥပဒေကြမ်းကို အတည်ပြုလိုက်လျှင် သတင်းအချက်အလက်အခွင့်အရေးနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ် သော ဥပဒေမူဘောင်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး၊ ပိုမိုကြီးကျယ်သည့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆီ လျှောက် လှမ်းနေသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီရေစီးကြောင်းမှ သွေဖည်သွားလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့် -
သတင်းအချက်အလက်အခွင့်အရေးသည် အများဆုံးထုတ်ဖော်ချက်ကို ကနဦးအယူအဆတရပ်အ ဖြစ်လိုအပ်သည်။ (သတင်းအချက်အလက်ကို အစိုးရမှ ချုပ်ကိုင်မထားဘဲ ပြည်သူသို့ များနိုင်သမျှ အများဆုံးထုတ်ဖော်ပေးရမည်ဟူသော အယူအဆကို အခြေခံအယူအဆအဖြစ်ထားရှိရမည်။) အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုတွင် အစိုးရမှထိန်းသိမ်းထားသော သတင်းအချက် အလက်များသည် အများပြည်သူ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ သို့သော် ဥပဒေကြမ်းသည် သတင်းအ ချက်အလက်များကို အစိုးရပိုင်ဖြစ်စေပြီး၊ အများဆုံးထုတ်ဖော်ချက်အစား လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသာ အခြေခံအယူအဆဖြစ်စေသည်။
သတင်းအချက်အလက်အခွင့်အရေးသည် တောင်းဆိုချက်တစ်ရပ်ကို စောင့်နေရန်ထက် သတင်း အချက်အလက်များကို တောင်းစရာမလိုဘဲ ကြိုတင်တက်ကြွစွာထုတ်ဝေပေးရန် လိုအပ်သည်။ သို့သော် ဥပဒေကြမ်းအရ အစိုးရသည် မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမျှ ထုတ်ပြန်ရန် မလို အပ်ချေ။
သတင်းအချက်အလက်အခွင့်အရေးသည် လူထုကို ယင်းတို့၏အခွင့်အရေးများအား အသိပေး တင်ပြရန် ပွင့်လင်းသောအစိုးရကို လိုအပ်သည်။ သို့သော် ဥပဒေကြမ်းအရ အများပြည်သူသည် သတင်းအချက်အလက်မည်သို့ရယူနိုင်ကြောင်းကို အစိုးရမှ အသိပေးတင်ပြရန် မလိုအပ်ချေ။
သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပြန်ရာတွင် သတင်းမထုတ်ပြန်ရသည့်ချွင်းချက်နယ်ပယ်ကို ကန့် သတ်ရန် သတင်းအချက်အလက်အခွင့်အရေးက ဥပဒေများလိုအပ်သည်။ သို့သော် ဥပဒေကြမ်း အရ ဝန်ကြီးသည် မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို လျှို့ဝှက်အဆင့်သတ်မှတ်နိုင်သည့် အတွက် သတင်းမထုတ်ပြန်ရသည့် ချွင်းချက်နယ်ပယ်သည့် အကန့်အသတ်မရှိဖြစ်နေသည်။
သတင်းအချက်အလက်အခွင့်အရေးသည် သတင်းကိုလက်လှမ်းမီနိုင်သည့်အခွင့်အရေးကိုပြည်သူအားပေးရန် ရှင်းလင်းပြီး အချိန်တိကျသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ လိုအပ်သည်။ သို့သော် ဥပဒေကြမ်းသည် လုပ်ငန်းစဉ် အလုံးစုံကို ပြဌာန်းသတ်မှတ်ရန် ပျက်ကွက်လျှက်ရှိသည်။
သတင်းအချက်အလက်အခွင့်အရေးသည် သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပြန်ပေးရာ၌ဥပမာ- မိတ္တူကူးခြင်းစသည်တို့တွင် လိုအပ်သည့်အခကြေးငွေကို အချိုးအစားမျှမျှတတ သတ်မှတ်ပေး ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပြန်ရန် တောင်းဆို မှုတစ်ခုချင်းစီအတွက် အခကြေးငွေကို ဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဟု ဥပဒေကြမ်းမှ ဆိုထားပြီး၊ ငွေကြေး ပမာဏဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ကိုမူ မည်သည့် မူဘောင်မှ ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိချေ။
သတင်းအချက်အလက်အခွင့်အရေးအရ (အစိုးရမှ လွဲမှားစွာလုပ်ဆောင်နေသည့် သတင်းအချက် အလက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားသည့်) အဖြစ်မှန်ဖော်ထုတ်သူများကို ဥပဒေ၊ အုပ်ချုပ်ရေး သို့မ ဟုတ် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များမှ အကာကွယ်ပေးရန် လိုအပ်သည်။ သို့သော် ဥပဒေကြမ်းတွင် အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပြန်ခြင်းအ တွက် ထောင်ဒဏ်များ ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားသည်။
နိုင်ငံရေးအကူးအပြောင်းကာလ (၉) နှစ်ကြာပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အလျှို့ဝှက်ဆုံးအစိုး ရများထဲမှ တစ်နိုင်ငံဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အစိုးရချုပ်ကိုင်ထားသည့် အခြေခံသတင်းအချက်အလက်လေးမျှ ကိုပင် ရယူရန်မည်မျှခက်ခဲကြောင်း အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် မီဒီယာများမှ မကြာခဏဆိုသလို မီး မောင်းထိုးပြကြသည်။ ဥပဒေကြမ်းမှ ယင်းခက်ခဲသည့်အခြေအနေများကို တာရှည်စေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
အစိုးရ၏ ယခင်ကတိကဝတ်များဖြစ်သည့် သတင်းအချက်အလက်အခွင့်အရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ပိုမိုပွင့် လင်းမြင်သာသည့်နိုင်ငံတော်အဖြစ်ပုံဖော်ခြင်းတို့ကို ပြန်လည်ထပ်ဟပ်ဆောင်ရွက်ရန် FEM မှ အစိုးရနှင့် လွှတ်တော်ကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
အစိုးရအနေဖြင့် သတင်းအချက်အလက်အခွင့်အရေးဥပဒေ (RTI law) ကို ပြဌာန်း အကောင်အထည် ဖော်ရန် ဆန္ဒမရှိသေးလျှင် သို့မဟုတ် မတတ်နိုင်သေးလျှင်တောင်မှ သတင်းအချက်အလက်အခွင့်အရေး ကို သိသာထင်ရှားစွာ ချိုးနှိမ်မှေးမှိန်စေသည့် ယခုဥပဒေကြမ်းကဲ့သို့သော ဥပဒေများကို ရေးဆွဲပြဌာန်း ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။
Tagged with: Draft law, Right to information